Mamirapiratra mankany amin'ny flash raha tsy miverina amin'ny Recovey | Androidsis
[APK] Flashify dia mamela anao hamaky rakitra zip fa tsy mila miverina amin'ny fomba fanarenana indray
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, apk, Fampiharana Android, Tutorials
Androany dia te-hanolotra ny kinova farany misy amin'ny fampiharana manaitra ho an'ny Android aho, Flashify. Fampiharana iray izay raha toa ianao ka mpampiasa Root ary manana ny fanovana nomaniny ho solon'izay TWRP, CWM o Philz, azo antoka fa efa fantatrao tsara izany satria mamela anao fisie flash zip, fisie sary boot na fanarenana tsy mila maika hamerenana ny terminal Android misy antsika amin'ny fomba fanarenana.
Ahoana no ilazako aminao, ho afaka hahazo maimaimpoana maimaimpoana amin'ny fampiharana Google Play maimaimpoana amin'ny alalàn'ny Google Play Store izahay, na dia misy fividianana amin'ny fampiharana hampandeha azy mifanaraka amin'ny safidy inona aza.Mizarà ny apk ho fisintomana mivantana sy fametrahana tanana ary koa hanazava ny tena fiasany.
1 Inona no atolotry ny Flashify antsika ho an'ny Android?
2 Ahoana no ahazoako ny rindrambaiko Flashify ho an'ny Android?
Inona no atolotry ny Flashify antsika ho an'ny Android?
Ny tena fiasan'ny Flashify ho an'ny Android, no safidy tsy azo iadian-kevitra izay mamela antsika hmanarona zip fa tsy mila miverina miverina amin'ny fanamboarana novaina, na dia tsy izany ihany no safidy mahaliana ananantsika hatramin'ny mampiavaka azy ny toetrany:
Flash mods sy fisie sary tsy miverina miverina amin'ny maody fanarenana.
Safidy hanadiovana Cache, Dalvik ary angona avy amin'ilay rindrambaiko mihitsy nefa tsy miditra amin'ny Recovery.
Sintomy ireo kinova vaovao an'ny fanarenana lehibe nohavaozina ary koa Kernel. (Safidy ho an'ireo mpampiasa Premim).
Patch Loki mandeha ho azy raha ilaina.
Nandroid Backups amin'ny feno.
Famerenana amin'ny laoniny nomanina miaraka amin'ny rindranasa, eny, famerenana amin'ny laoniny fanarenana. (Premium)
Ampifanaraho ary tahirizo mivantana ny cloud nandroids anay ao anaty rahona amin'ny alàlan'ny Dropbox, Box na Drive.
Mety ahafahana mametaka rakitra zip marobe mandritra ny fotoana iray.
Maimaimpoana tanteraka ity rindranasa ity ary mitaky fandoavambola Premium amin'ny andiana serivisy fanampiny, ary koa raha te-handrehitra zip mihoatra ny telo isan'andro isika.
Ahoana no ahazoako ny rindrambaiko Flashify ho an'ny Android?
Ny fomba tsara indrindra mahazo Flashify ho an'ny Android Amin'ny alàlan'ny fanindriana ity rohy manaraka ity, eo ambanin'ireto tsipika ireto izay hitondra antsika mivantana any amin'ny Google Play Store ho an'ny rindranasa Android.
Flashify (ho an'ny mpampiasa faka)
Na dia tia ny tenanao aza ianao ampidino mivantana ny rindranasa amin'ny endrika apk, mila fotsiny ianao tsindrio ity rohy ity izay hitondra anao mankany amin'ny toerana fitahirizana APK Mirror. Raha hametraka azy io amin'ny tanana, tadidio fa manana safidy azo atao aloha ahafahana mametraka rindranasa ivelan'ny Google Play Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Fanarenana Android » [APK] Flashify dia mamela anao hamaky rakitra zip fa tsy mila miverina amin'ny fomba fanarenana indray
HELLO: Ity programa ity dia manampy ahy manamboatra samsung gt B5510l misy hadisoana manjelanjelatra, izay mamela ahy hiditra amin'ny fanarenana ihany.
Mamaly an'i marlaw
Edgar palomino dia hoy izy:
Tena tsy azoko mihitsy ny momba an'ity programa ity
Valiny tamin'i Edgar Palomino
Fampiharana 10 izay tsy azo banga amin'ny Android-nao
Elephone dia manomana telefaona Android sy Windows 10